အဘယ်ကြောင့် covid လူနာတွေအတွက်အောက်စီဂျင်ရှားပါးမှုရှိသနည်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်လိုအပ်မှုကမြင့်တက်နေပါတယ် ဆေးရုံများ၊ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဆေးရုံများမှရရှိသောထောက်ပံ့မှုများထက် ကျော်လွန်၍ - Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုကမ္ဘာကြီးမည်သို့ကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကူးစက်ရောဂါ၏နောက်ဆုံးထိတ်လန့်စရာကတော့ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိလူများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်မရရှိခြင်းကြောင့်သေဆုံးနေကြရသည်။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယ ။ Covid-19 ရှိဆေးရုံများသို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသောင်းချီသောလူများကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ထောက်ပံ့ရေးထက် ကျော်လွန်၍ အောက်စီဂျင်လိုအပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အောက်ဆီဂျင်သည်လေထု၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ လက်တဆုပ်စာကုမ္ပဏီများက၎င်းကိုအမြောက်အများသိမ်းဆည်းလိုက်သည်၊ သို့သော်အများစုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ရောင်းချသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးဒေသအတော်များများသည်ရောင်းချသောဆေးဝါးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အခြေခံအဆောက်အအုံများမရှိကြပါ။ဆေးရုံခန်းများသို့ပိုက်များမှတဆင့်ပို့ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ဤကုမ္ပဏီများကဖြစ်သည်။
အချို့သောဆေးရုံများနှင့်ဆေးခန်းများတွင်အောက်စီဂျင်သန့်ရှင်းစွာထုတ်လုပ်ထားသောစက်များရှိသည်။ ထိုပမာဏသည်အလွန်နည်းသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောနိုင်ငံများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိဆေးရုံများနှင့်လူနာများစွာသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုအဆိုးရွားဆုံးသောနိုင်ငံများတွင်အောက်ဆီဂျင်သိုလှောင်ရုံများအတွက်ဈေးအပေါဆုံးနည်းလမ်းကိုမှီခိုကြသည်။
ဒီပြတ်လပ်မှုက Covid ရှိသူတွေမဟုတ်ဘဲအောက်စီဂျင်လိုအပ်တဲ့အသက်ရှူမမှန်ခြင်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလမှာတစ်နှစ်အောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံယူရမယ်၊ ယခုခန့်မှန်းချက်သည်ဒေါ်လာ ၆.၅ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးများနှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်သုံးစွဲသောငွေ၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်းဤငွေများကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများမအောင်မြင်ပါ။ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်သမားများ။
တစ်ခု။ မက္ကဆီကိုရှိ Iztapalapa ရှိအစိုးရမှအခမဲ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်အောက်စီဂျင်တင့်များဖြည့်သောဝန်ထမ်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်လတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်လိုအပ်မှုသည်သုံးဆကျော်တက်ခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ် ... Hfrance.fr အတွက် Luis Antonio Rojas
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောကပ်ရောဂါတစ်ခုအတွင်းတွင်အောက်စီဂျင်အလွန်လိုအပ်နေသည်နှင့်အမျှအကျပ်အတည်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ P.P.E. - သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူတ ဦး တည်းကူးစက်မှုစိန်ခေါ်မှုကနေအခြားသို့ပြောင်းရွှေ့ရှိရာတစ်နှစ်အတွက် ပိတ်ဆို့မှုများ၊ စီးပွားရေးပြိုလဲမှု၊ အဝေးသင်ကျောင်းများ၊ ကုထုံးများ၊ ကာကွယ်ဆေးများ - အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုသည်ဘယ်သောအခါမျှစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးသို့မရောက်နိုင်ပါ။
လုံလောက်တဲ့ ဦး စားပေးမှုရှိတယ်၊ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်မလုံလောက်မှုကိုဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Unitaid မှအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ bert Matiru ။
ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကပင်အဆင်းရဲဆုံးဒေသအချို့သည်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့များမရရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်ယခုနှစ်အစောပိုင်းအထိသေစေနိုင်သောအောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်မှုသည် မြောက်ပိုင်းဘရာဇီး ၊ မက္ကဆီကို နှင့်အခြားဒေသများကိုထိမှန်ခဲ့သည်။ အလားအလာရှိသောပြproblemနာတစ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ရာသည် အရေးပေါ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်အောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်မှုအတွက်အရေးပေါ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ရန်ပုံငွေများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
တည်ရှိပြီးအတော်အတန်များသောနေရာတွင်ပေါက်ကွဲပြီးကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်ရာနေရာဆီသို့အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကိုတွန်းပို့သည်။ အိန္ဒိယ၏ coronavirus ကူးစက်မှုနှုန်းသစ်သည်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှတစ်နေ့ပျမ်းမျှ ၁၁၀၀၀ ဝန်းကျင်သို့မြင့်တက်လာပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနေ့စဉ်ယန်း ၃၇၀,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်လအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်လိုအပ်မှုသည်တစ်နေ့လျှင်ကုဗမီတာ ၉ သန်းအောက်မှ ၂၈ သန်းအထိသုံးဆကျော်လွန်သွားကြောင်း
Image အယ်လ် Paso ဆေးရုံရှိအောက်စီဂျင်အရည်များအောက်စီဂျင်။ Credit ...
href=> Joel Angel Juarez ကို Hfrance.fr
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများတွင်ဆေးရုံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လေထုထက်ပိုမိုသိပ်သည်းသောအောက်စီဂျင်အရည်အမြောက်အများကိုသယ်ဆောင်ရန်ရေနံတင်သင်္ဘောများပေါ်တွင်အားထားကြသည်။ ၏စနစ်ပိုက်များကဓာတ်ငွေ့ကိုစုပ်ယူသည်၊ ၎င်းကိုသာမန်သိပ်သည်းဆအထိတိုးချဲ့နိုင်ပြီးဘေးဘက်တိုင်းသို့ဖြန့်ဝေစေသည်။
ဒီဟာကအောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ဖို့ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အောက်စီဂျင်ပမာဏအမြောက်အများကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ဓါတ်ငွေ့များနှင့်မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များရှိသော
ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းကဆေးရုံတော်တော်များများဟာအောက်စီဂျင်အရည်ကိုသုံးဖို့ပစ္စည်းကိရိယာတွေမတပ်ဆင်ထားကြဘူး၊ လူနာတွေကိုဆေးပေးဖို့ပြွန်လည်းမရှိဘူး။ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေမှာဖြန့်ဝေပေးတဲ့စနစ်မရှိဘူး။ အောက်စီဂျင်ကိုလည်းdသိပ်သိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့မဟုတ်သောdတွင်လည်းရရှိနိုင်သည်ပိုပြီးမကြာခဏ refilled ရန်လိုအပ်ကြောင်းပုလင်း။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုစျေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အောက်စီဂျင်အရည်ထက် ၁၀ ဆပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်လူသားများအတွက်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Covid အကျပ်အတည်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း
: အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆေးရုံတင်ကုတင်တွေမလုံလောက်တာအပြင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းနိမ့်ကျမှုကအိန္ဒိယမှာရောဂါနဲ့သေဆုံးနှုန်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များအရေအတွက်:
အမှန်တကယ်သေဆုံးမှုသည်တရား ၀ င်ကိန်းဂဏန်းများထက်ကျော်လွန်နေပါတယ်။ ဒီဂရပ်ဖစ်သည် Covid ၏သိသိသာသာဖြစ်ပွားမှုများသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမည်မျှတိုးများလာသည်ကိုဖော်ပြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအိန္ဒိယမှခရီးသွားလာခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ Australiaစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းမှ ၀ င်လာသည့်ခရီးသွားလာရေးအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံသားများ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းအလှူရှင်များသည်အစားအစာ၊ ဆေးစရိတ်၊ P.P.E. အတွက်ငွေလှူဒါန်းသည်။ နှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအကြားအောက်စီဂျင်တင့်ကား။
နိုင်ငံများစွာတွင်လူများသည်၎င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပုလင်းများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဖြည့်ရန်အလျင်အမြန်ဖြစ်သော်လည်းရောင်းလိုအားမှာအလွန်တရာလိုအပ်သည်။
တချို့သောဆေးရုံတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုလေထဲကနေထုတ်ယူနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတွေရှိတယ်။ ဒီနည်းပညာကဖိအားတွေစုပ်ယူမှု (PSA) စုပ်ယူခြင်း (သို့) PSA လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစနစ်တွေကစျေးကြီးတယ်။ အိပ်ယာခင်း။
လူနာတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်လူအနည်းငယ်အတွက်အစေခံနိုင်တဲ့အောက်စီဂျင်စုစည်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဆင်းရဲသားတိုင်းပြည်များတွင်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုသည်ဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်သော်လည်းထုတ်လုပ်သူများထက်ဝယ်လိုအားမှာမြင့်တက်ခဲ့သည်။သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ပါ။ Image အီတလီ၊ Chianti ရှိ Tuscan ရွာ Tuscan ရွာကဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်သည်ဆေးဆိုင်ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အချည်းနှီးသောအောက်စီဂျင်ဘူးများကိုမျဉ်းဖြောင့်ထားသည်။ သံဗူးများတွင်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်၎င်းကိုအမြောက်အများပေးပို့ခြင်းထက် ၁၀ ဆပိုမိုစျေးကြီးသည်။ Credit ...
Hfrance.fr အတွက် Nadia Shira Cohen ကို
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူများကဆေးရုံများတွင် PSA ဆေးခန်းများနှင့်အတူပူးတွဲပါရှိမည့်ပိုက်လိုင်းများရှိသင့်သည်။ သို့သော်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်ဤဖြေရှင်းချက်သည်စျေးကြီး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီဖြင့်သာရနိုင်သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရသည်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရာနှင့်ချီသောဆေးရုံများတွင်တပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းလပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ PSA စက်ရုံများနှင့်အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးစက်များပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချိန်ယူရသည်။
များစွာသောအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် lအစိုးရများအနေဖြင့်အဓိကဓာတ်ငွေ့လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်အရေးကြီးသောဓာတ်ငွေ့များရရှိရန်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေသည်။ အိန္ဒိယတွင်အစိုးရသည်လူနာများကိုအောက်စီဂျင်သယ်ဆောင်ရန်ရထားများနှင့်
တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းအောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုတိုးမြှင့်ရန်ကြိုးစားခြင်း၏အခက်အခဲ။ အဲဒီအစား Mr. Matiru က 'ကမ္ဘာကြီးသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။ သို့မှသာစွမ်းအားမြင့်တက်ပါက' Go 'ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
2021-06-19 12:24:01 | ကမ္ဘာကြီး...
အစ္စရေးကဆေးပမာဏ ၁ ဒသမ ၄ သန်းအထိပို့ရန်သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပါလက်စတိုင်းများကအစားထိုးခဲ့သည်။ ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့သည်မှာပထမအပိုင်းသည်အစ္စရေးနိုင်ငံမှငြင်းဆိုသောသက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်နီးကပ်လွန်းသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။...
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မူကွဲပျံ့နှံ့အဖြစ်နင်္ဂနွေနေ့ပိတ်သိမ်းဖို့ပေါ်တူဂီအမိန့် lis lisbon
2021-06-19 10:07:37 | ကမ္ဘာကြီး...
ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မတ်လမှစ၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးယခုအပတ်တွင်နိုင်ငံအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းဖြစ်သည်။...
2021-06-19 09:21:40 | ကမ္ဘာကြီး...
ကီဝီစစ်ပွဲများ - နယူးဇီလန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားရန်ငြိုးထားသည့်ရွှေအသီး
2021-06-19 09:18:19 | ကမ္ဘာကြီး...
၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစူပါပါဝါ၊ မှောင်ခိုလုပ်ငန်း၊ ပလိပ်နှင့်အမွေးနည်းသောအသီးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ စူပါမားကတ်စင်များနှင့်နေ့လည်စာအိတ်များ၌နှိမ့်ချသောကျီကီသည်နယူးဇီလန်၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဟော်ရီကာချာတင်ပို့မှုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကသစ်သီးဝလံများကိုထိန်းချုပ်ရန်တိုက်ပွဲများကနယူးဇီလန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားဆ...
Oxford covid vaccine ကာကွယ်ဆေးသန်းပေါင်း ၁၂၀ ကိုအရေးပေါ်ဆေးထိုးရန် EU သည်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မအောင်မြင်ပါ
2021-06-19 09:16:35 | ကမ္ဘာကြီး...
လကုန်တွင် AstraZeneca မှအရေးပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သန်း ၁၂၀ ကိုအီးယူမှတရားဝင်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး Oxford နှင့် Staffordshire ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပို့ဆောင်ရန်အတွက်အတိတ်တွင်အသုံးပြုသင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကထောက်ပံ့ခဲ့သောပမာဏထက် ၁၀ သန်းမျှသာပိုများရန်နှင့်အစွမ်းထက်သည့် "...
2021-06-19 08:40:36 | ကမ္ဘာကြီး...
၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် Kirby Institute မှရောဂါဗေဒပါမောက္ခပါမောက္ခ Stuart Turville သည်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေသည်။ သူသည် Covid-19 ကိုဖြစ်ပွားစေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလေ့လာပြီးမွေးမြူသည့် New South Wales တက္ကသိုလ်မှလုံခြုံရေးဌာန၏လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသောဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဦး ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ သူနဲ့သူ့အဖွ...
'မျိုးသုဉ်းရန်လမ်း၌' - မကြာမီ koalas ကိုသြစတြေးလျအရှေ့ပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်
2021-06-19 08:27:35 | ကမ္ဘာကြီး...
တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုများနှင့်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုအပြီးတွင် Koalas အား Queensland၊ New South Wales နှင့် Australian Capital Territory တို့တွင်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေ၏...
2021-06-19 05:21:11 | ကမ္ဘာကြီး...
စနေနေ့မနက်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအော့ကလန်တွင်လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူတစ် ဦး သေဆုံးပြီးလူနှစ် ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ လေဆင်နှာမောင်းသည် Papatoetoe ၏ဆင်ခြေဖုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်တွင်လူပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သစ်ပင်များ၊ ခေါင်မိုးများကိုဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုခုတ်လှဲခြင်းများကျွန်...
ဗြိတိန်နိုင်ငံကောင်စီများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်ဖြစ်သောငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုချက် ၁၀ ခုအနက် ၆ ခုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်
2021-06-19 05:11:48 | ကမ္ဘာကြီး...
အင်္ဂလန်ရှိလုပ်သားများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်သီးခြားခွဲထားရန်ကူညီရန်အကူအညီများကိုတောင်းခံနေကြပြီး Covid-19 ကိုကန့်သတ်ရန်အဓိကသော့ချက်မူဝါဒသည်ကူးစက်ရောဂါများတိုးပွားလာသည့်ကြားမှ 'ကျရှုံး' နေကြောင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂများမှသတိပေးမှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ တောင်းဆိုမှုများအရမတ်လတွင်အရေးပါသော C...
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Sapporo တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအမျက်ဒေါသအပြီးတွင်ဝက်ဝံသေသည်
2021-06-19 00:17:46 | ကမ္ဘာကြီး...
မုဒိမ်းကောင်များသည်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သောအဝါရောင်ဝက်ဝံအားဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Sapporo တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကသိသိသာသာသတင်းဗီဒီယိုဖိုင်များကဝက်ဝံသည်လူနေအိမ်ရာလမ်းတစ်လျှောက်ခုန်ပေါက်ထွက်ပြေးနေပြီးလမ်းများကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဝက်ဝံကိုပြောင်နေသည်။...
အယ်ဒီတာချုပ်၏ဖမ်းဆီးခံရမှုအပြီးတွင်ဟောင်ကောင်လူမျိုးများသည်နေ့စဉ်အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀ ယ်ယူရန်တန်းစီနေကြသည်
2021-06-19 00:16:19 | ကမ္ဘာကြီး...
အမျိုးသားလုံခြုံရေးရဲကအယ်ဒီတာနှင့်အခြားဒါရိုက်တာလေး ဦး ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အက်ဒီးယန်းနေ့စဉ်သတင်းစာ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုဟောင်ကောင်မှသောကြာနေ့မွန်းလွဲတွင်မြို့သတင်းစင်များ၌တန်းစီခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့နံနက်တွင်ဟောင်ကောင်ရဲဌာနမှအမျိုးသားရာနှင့်ချီသောအရာရှိများ အယ်ဒီတာချုပ်ရိုင်ယန်ဥပဒေနှင့်အက်ပဲလ်...
2021-06-19 00:11:24 | ကမ္ဘာကြီး...
သူ့ကိုယ်ပိုင် WeChat အကောင့်တွင်မယားပြိုင်ယူခြင်းကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်တရုတ်ပညာရှင်တစ် ဦး အားသူ၏တက္ကသိုလ်မှဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ ရှန်ဟိုင်းရှိနာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှင့်အရှေ့တရုတ်ဥပဒေအကြံပေး Bao Yinan, သူ၏အလုပ်ရှင်ကစွပ်စွဲခဲ့သည် "မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များအောင်။ " ယခုအခါတက္ကသိုလ်သည်သင်ကြာ...
နယ်သာလန်သည် covid jab မက်လုံးအဖြစ်အခမဲ့ herring ကိုကမ်းလှမ်းသည်
2021-06-19 00:09:46 | ကမ္ဘာကြီး...
၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်မှကားများ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဟောင်ကောင်မှကြက်များကိုပေါင် ၁. ၂ သန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ရုရှားသည် Covid ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဆားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြင့်ရောင်းချသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၇၅ သန်းခန့်လောင်ကျွမ်းသောရိုးရာဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သော Hollandse nieuwe (သို့) ရာသ...
လူတွေကနားမထောင်ခဲ့ကြ - Julie Douib ကိုသတ်မှုသည်ပြင်သစ်၌သတ်ဖြတ်မှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်
2021-06-18 23:50:29 | ကမ္ဘာကြီး...
Julie Douib ကသူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းကသူမကိုသတ်လိမ့်မည်ဟုသူမအားပြောခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏မိသားစုကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူ့ကိုရဲထံသို့ ၁၀ ကြိမ်တိုင်ကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူ၌ပင်သေနတ်ရှိကြောင်း၊ သူအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုသူမကြောက်ရွံ့ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သို့သော်သူမညွှန်ပြခြင်းမပြုလျှင်သူတို့ဘာမျှမတတ်နိုင်ဟုပြော...
“ အတူတကွအဆင်ပြေသောကြောင့်” - နေရာတိုင်းခိုနှင့်သွားသောပြင်သစ်လူမျိုး
2021-06-18 23:48:56 | ကမ္ဘာကြီး...
Xavier Bouget (၈၀) သည်စက်ဘီးစီး။ သွားသည့်အခါခမ်းနားထည်ဖြူသောခိုတလုံးသည်သူ၏ ဦး ထုပ်ကိုတက်သည်။ သူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်သူလုပ်သောအခါလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လက်သည်းများကိုတွေ့သည်။ သူသည်ဥယျာဉ်ကိုရေလောင်းသောအခါသူသည်သူ့ကိုပခုံးပေါ်မှကြည့်လိုက်သည်။ ဘရီတနီအနောက်မြောက်ပိုင်းမှအငြိမ်းစား Bouget ကငှက်နှင့်မိတ်ဖွဲ...